Infuse 2, mpilalao horonantsary tsara indrindra ho an'ny iOS, efa misy | Vaovao IPhone
Hatramin'ny nanombohan'ny Infuse, dia iray amin'ireo mpilalao tiako indrindra izy noho ny endriny, na dia nisy aza ny lesoka namela azy tamin'ny toerana ambany kokoa noho ny hafa, toa ny VLC ohatra, ary ny fanaovana kajy fa fampiharana fandoavam-bola izy io, ary tsy mora, zavatra tokony ho raisina izany. Efa ela izy ireo no nanambara fanavaozana misy fiasa vaovao amin'ny endrika fampiharana vaovao, Infuse 2, ary efa tonga izy io. Ary heveriko fa tsy mampidi-doza loatra ny milaza fa io no fampiharana tsara indrindra hilalao horonantsary misy ankehitriny ao amin'ny App Store.
Ny endrika dia mbola mahavariana amin'ny iPhone sy iPad. Ny rindranasa dia misintona ny metadata an'ny sarimihetsika izay notehirizinao tao amin'ny fitaovanao, ary atolotray azy ireo amin'ny fonony sy ny famintinana azy ireo. Famolavolana izay na dia ireo mitsikera indrindra ny estetika apetraky ny iOS 7 aza dia mahita manintona. Tsy mamela fotsiny ny filalaovana sarimihetsika nampidirinao tamin'ny iPhone tamin'ny alàlan'ny iTunes, fa koa ireo izay ampidirinao mivantana amin'ny Infuse 2 amin'ny alàlan'ny iTunes, ary raha mampiasa an'io fomba io ianao dia hadinonao ihany koa ny tsy maintsy manova rakitra, satria manohana tanteraka ny avi sy mkv.
Hatreto dia tsy misy zava-baovao, fa izao dia misy ny tena tsy itovizany amin'ireo rindranasa hafa mitovy amin'izany: mamela ny fidirana amin'ny kapila zaraina amin'ny tamba-jotra misy anao izany, na fampirimana ifampizarana amin'ny solo-sainanao, na na dia ny Time Machine na NAS hafa anananao ao an-trano aza. Ny fifandraisana amin'ny tambajotra WiFi iray ihany sy ny fahalalana ny anaran'ny mpampiasa sy ny teny miafenana hidirana amin'ireo kapila zaraina dia ampy. Ny rindranasa dia afaka milalao izay sarimihetsika voatahiry ao amin'izy ireo, eny fa na dia mkv amin'ny famaritana avo aza, miaraka amina fitenenana mahatalanjona, ary manohana dian-peo sy dikanteny hafa
Tsy manana ny dikanteny amin'ny sarimihetsika? Aza manahy izany izy ireo dia azo sintonina avy amin'ny subtitles ary voavaha ny olana. Te hanana antony bebe kokoa handinihana azy io ho tsara indrindra ve ianao? Azonao atao ny mandefa horonan-tsary amin'ny Apple TV amin'ny alàlan'ny AirPlay. Te hilalao ny tranombokin'ny sarimihetsika FullHD amin'ny Apple TV ve ianao fa tsy tianao izany? avadiho ho endrika iTunes izy ireo? Play azy ireo amin'ny iPhone na iPad ampiasainao amin'ny fampiasana Infuse 2 ary isaorana ny AirPlay alefaso any amin'ny Apple TV izy ireo ary ankafizo izy ireo amin'ny fahitalavitrao.
Maimaimpoana tanteraka ny Infuse 2, fa raha te hamaha ireo fiasa mandroso sasany ianao, toy ny hoe afaka mifandray amin'ny kapila tambajotra dia tsy maintsy mampiasa fividianana tafiditra ianao ary 4,49 € dia hanana ny fampiasa rehetra an'ity fampiharana mahafinaritra ity ao aminao tanana. Raha nividy ny kinova taloha ianaoAza matahotra, satria hanana Infuse 2 miasa tanteraka ianao nefa tsy mila mandoa denaria iray, antsipiriany iray avy amin'ireo mpamorona azy.
Fanazavana fanampiny - Avadiho mora foana ny sarimihetsikao amin'ny iTunes miaraka amin'ny Handbrake
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Infuse 2, ilay mpilalao horonantsary tsara indrindra ho an'ny iOS, efa misy izao
Amin'ity rindrambaiko ity dia afaka mahita horonan-tsary amin'ny avi na mkv avy amin'ny kapila mafy wifi ianao, manana ny seirate wirelles mediashare aho fa ny fampiharana azy no mamaky endrika ipad fotsiny, arahabaona.
Valiny tamin'i Jovi
Amin'ny teôria eny. Izaho no manao ny fitsapana ary lazaiko aminao, satria izaho koa
Azonao atao ve ny milaza amiko, azafady, inona ny maha samy hafa an'ity fampiharana ity sy ny "air video hd"? Efa ananako io iray io ary raha tena tsy mitovy izy na manome zavatra fanampiny dia heveriko ny fividianana.
Ny Air Video HD dia mitovy amin'ny Plex, izay efa noresahintsika tamin'ny lahatsoratra iray hafa eto. Tsy maintsy mamorona mpizara amin'ny Mac-nao ianao, ary miaraka amin'ny rindrambaiko amin'ny iPad na iPhone dia miditra amin'ny tranomboky ianao.
Hafa ny infuse 2, miditra mivantana amin'ny lahatahiry nozaraina izy, tsy mila mpizara na zavatra mitovy amin'izany. Io dia ahafahanao miditra amin'ny kapila tambajotra, toy ny Time Capsule na kapila mafy rehetra mifandray amin'ny router.
Nanapa-kevitra ny hividy Infuse aho satria avy amin'ny FireCore (fantatro tao amin'ny JB an'ny Apple Tv 2). Mahafinaritra izany.
Luis, ny tianao holazaina ve dia hoe manaiky ahy izy ary milalao ny sarimihetsika notehiriziko tao amin'ny Time Capsule, nefa tsy niova fo taloha?
Mpandrindra ny IPad News. https://www.actualidadiphone.com
Salama Luis! Niezaka ny hizara ny fampirimana sarimihetsika amin'ny mac-ko aho, mba hahafantaran'ny Infuse 2 azy io, mandra-pahatongan'ny olana, fa avy amin'ny Infuse dia mangataka andian-dahatsoratra tsy haiko ny fampiharana azy ireo, ary iza avy ireo: Workgroup , Mpampiasa sy teny miafina. Tokony hanao ahoana izy ireo? Afaka manampy ianao?
Tsy misy na inona na inona ao amin'ny Workgroup. Amin'ny solonanarana sy tenimiafinao dia tsy maintsy apetrakao ny anaranao sy ny tenimiafinao Mac, izay hahazo alalana hiditra ao amin'ilay fampirimana nozaraina.
Azoko. Avy eo dia tsy maintsy anarana mitovy amin'ny tenimiafina izay angatahiny amiko, ohatra, rehefa te hametraka rindranasa na programa amin'ny Mac aho.
Misaotra an'i Luis!
Azo atao ve ny milalao sarimihetsika voatahiry ao amin'ny wd ny rahona amin'ny fahitalaviako amin'ny alàlan'ny ipad 2 sy air play? Misaotra anao.
Valiny tamin'i José Maria
Aitor lee dia hoy izy:
Salama tsara, hijerena raha mahavaha fisalasalana kely ianao;
Rehefa mifandray amin'ny tambajotra ivelany aho hampiditra 2; Azo atao amin'ny 3G ve izany sa tsy maintsy Wi-Fi eo an-toerana hatrany ny fifandraisana?
Ahoana no nifandraisan'ny mpizara qnap ahy tao anaty, satria ny IP ananako dia anatiny, ary satria fifandraisana ivelany, inona no IP hapetrako?
Raha ny fahitako azy dia fampiharana tsara, na dia manana horonan-tsary sy plex aza aho, dia tsy misy manampy ahy hijerena ireo horonantsary rehefa lavitra ny tranoko aho satria tsy manana fahefana hamindra kaody ny qnap.
Mamaly an'i Aitor lee
Aitorlee dia hoy izy:
Salama maraina. Azonao atao ve ny milaza amiko ny fomba ifandraisanao amin'ilay rindranasa ivelan'ny trano? Satria nahomby aho fa rehefa afaka mifandray amin'ny NAS qnap 212 dia ny fampirimana ihany no miseho ary toa foana, tsy misy atiny. Inona no antony? Misaotra betsaka anao sy ilay rindranasa mahafinaritra, manana plex aho, horonan-tsary HD fa ny transcode dia tsy maintsy ny solosaina no manao azy, raha miaraka ampidirina kosa dia hikarakara ny zavatra rehetra izy.
Mamaly an'i Aitorlee
Salama ry luis, nahavita nampifandray azy io ve ianao amin'ny verbatim mediashare wirelles?
Eh, efa ela be izay, saingy eny, heveriko fa tadidiko fa nahazo izany aho. raha ny marina dia misy DLNA afaka mifandray.
Ilay Honda Civic vaovao dia hanana efijery mifanaraka amin'ny iPhone
Miseho ny sarinà prototypot an'ny tranga misy iPhone 5C ho an'ny iPhone 5S